U-Miss Albinism eNingizimu Afrika, ungaphezu komncintiswano wonobuhle | Scrolla Izindaba
Babizwa ngama-‘aliens’. Abanye bayababulala ngoba bakholelwa ekutheni amalunga abo omzimba enza umuthi onamandla.
Kodwa okukuqala eNingizimu Afrika, izwe lonke likujabulele ukubakhona komncintiswano wonobuhle wokuqala ka-Mr and Miss Albinism eNingizimu Afrika ozobanjwa mhla zingama-27 kuNdasa kowezi-2021.
Umsunguli womncintiswano uGodfrey Mphatswe utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi lo mncintiswano oqale ukungenelwa ngonyaka owedlule awufani nhlobo neminye imicintiswano yonobuhle ejwayelekile.
“Ungumncintiswano wonobuhle ozoqaqa ifindo lokucwasana ngokwebala kubantu. Kahle kahle uzoletha ukuqonda futhi lokhu sikwenza ngoba sifuna ukufaka ukuzethemba phakathi kwabantu abaphila ngalolu hlobo. Ukuze nabo bazoba yinxenye yomphakathi kanye nokuthi ngaphandle kwabo asiphelele.”
UGodfrey okunguyena oqale umsebenzi wakhe wokumodela kowezi-2003 e-Mohlakeng, e-Randfontein, manje unomsebenzi wokumodela kwamanye amazwe emhlabeni futhi ungumholi wesisekelo seGodfrey Mphatswe.
Lona oneminyaka engama-36 uthe waqhamuka nalelisu ngenkathi ebizelwe ukuzobayijaji emncintisanweni wonobuhle abayizishawa e-Malawi kanye nase-Zimbabwe njengoba naye eyilungu lekomidi lonobuhle le-Mr Ningizimu Afrika.
“Ngabona ukuthi eNingizimu Afrika asinakho lokho. iNingizimu Afrika ifana nezwekazi lase-New York. Yithi obekumele ngabe sihola phambili futhi sikhuluma ngalezi zinkinga. Sihole ezingxoxweni kanye nokwenza okumele kwenziwe mayelana nalokhu,” uyasho.
Ngenkathi ekhulisa lesi sakhiwo, uGodfrey uye waxhumana nabantu abaningi abayizishawa ezweni abathe ‘bazizwa beshiywe ngaphandle’ ezintweni eziningi ngenxa yesimo sabo.